RASMI: 10 Kooxood oo xaqiijiyey inay u soo baxeen tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda… (Miyey ka mid tahay kooxdaada?) – Gool FM
(Yurub) 04 Maajo 2021. Tartanka xiisaha leh ee UEFA Champions League ayay koox weliba tartan u gashaa sidii ay xilli ciyaareedka xiga uga soo muuqan lahayd.
Haddaba waxaa illaa iyo haatan xaqiijiyey booskooda ka qeyb-galka Champions League xilli ciyaareedka soo socda toban kooxood.
Kooxaha reer Spain ee Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona iyo Sevilla ayaa si toos ah u xaqiijiyey inay xilli ciyaareedka soo aaddan ka soo muuqan doonaan Champions League.
Manchester City oo haatan qarka u saaran inay hanato horyaalka Premeir League ayaa ah kooxda kaliya ee Ingiriiska ka dhisan oo illaa iminka xaqiijisay u soo bixitaankeeda Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Naadiga reer Jarmal ee Bayern Munich, tan reer Talaani ee Inter Milan iyo Kooxda reer Holland ee Ajax oo dhammaantood ku guuleysatay horyaallada dalalka ay ka dhisan yihiin ayaa iska xaadiriyey booskooda Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda.
Waxaana tobanka kooxood ee u soo baxay Champions League fasal ciyaareedka soo aaddan dhammaystiraya naadiga ka dhisan Ruushka ee Zenit iyo Kooxda ka dhisan Ukraine ee Dynamo Kyiv.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka kooxood ee xaqiijiyey inay u soo baxeen tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka soo socda:-